सोलुखुम्बुमा हिमाल रोयल्टी खर्चको चर्चा « News of Nepal
सोलुखुम्बुमा हिमाल रोयल्टी खर्चको चर्चा
२४ फाल्गुन २०७३, मंगलवार
सोलुखुम्बु, २४ फागुन । स्थानीय निकायको चुनावी चर्चासँगै सोलुखुम्बुमा सगरमाथाको रोयल्टी कुन तहको सरकारले कसरी खर्च गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
यसअघि कुल रोयल्टीको ३० प्रतिशत जिल्लामा प्राप्त हुने र सो रकम जिल्लाको विकासका लागि खर्च गरिँदै आएकोमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै त्यो रोयल्टीको प्रयोग कुन तहमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको हो ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन लामा रोयल्टीको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय निकायले खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सगरमाथालगायत जिल्लामा रहेका धेरैजसो हिमाल प्रस्तावित खुम्बु पासाङलामु गाउँपालिकामा पर्छन् ।
तर जिविस सोलुखुम्बुका पूर्वसभापति आङनिमा लामाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मानवबस्ती पनि कम भएकाले यो रकम गाउँपालिकामै सीमित गरिनु सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले हाल जिल्लामा प्रस्ताव गरिएका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा बाँडफाँड गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्यटन दस्तुर समावेश गरिएको छ । यस व्यवस्थाले हेर्दा सम्बन्धित गाउँपालिकाबाहेक जिल्लामा रहेका अन्य स्थानीय निकायले भन्दा प्रदेश वा केन्द्र सरकारले खर्च गर्न पाउने देखिन्छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक जगनारायण आचार्यले स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा नआइसकेकाले आम्दानी स्रोतका बारेमा छलफल भइनसकेको बताउनुभयो । सरकारका जिम्मेवार निकाय चुनावको तयारीमा लागेकाले यसबारे छलफल सुरु नभएको भन्दै आचार्यले भन्नुभयो “मेरो विचारमा हिमालको रोयल्टी केन्द्र सरकार, प्रदेश र गाउँपालिका तीनै तहमा वितरण गरिनुपर्छ, किनकि हिमाल सबैको साझा हो ।”
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले केन्द्र सरकारले निश्चित प्रतिशत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा उक्त रोयल्टी प्रदान गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सगरमाथा आरोहीले तिरेको शुल्कबाट नेपाल सरकारको नाममा वार्षिक रु ३० करोडसम्म जम्मा हुने गर्दछ । सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालीले रु १५ हजारदेखि रु ७५ हजारसम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ भने विदेशी नागरिकलाई रु दुई लाख ५० हजारदेखि रु ११ लाखसम्म शुल्क लिइँदै आएको छ ।
यसरी वर्षभरि सगरमाथा आरोहण गर्नेबाट रु २५ करोड देखि ३० करोडसम्म सरकारले आम्दानी गर्दछ । हाल हिमालको सलामी दस्तुरबापतको रकम पर्यटन मन्त्रालयले ७० प्रतिशत आफैँ राख्छ भने ३० प्रतिशत पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सोलुखुम्बुलाई प्रदान गर्दै आएको छ । यसरी प्राप्त भएको रु ५३ करोड अहिले विभिन्न विकासे योजनामा विनियोजन भई खर्च हुने क्रममा छ ।
प्रदेश नं १ मा सोलुखुम्बुसहित १४ जिल्ला समावेश छन् । अब के सगरमाथाको आम्दानी रकम हिमालदेखि तराई हँुदै सुदूरपूर्वसम्म जोडिएका जनताले उपभोग गर्न पाउनेछन् ? या केन्द्र सरकारले नै ग्रहण गरेर वितरण गर्नेछ ? भन्ने प्रश्न स्थानीयले गरेका छन् ।
स्थानीय दावा शेर्पा केन्द्र सरकारले यसमा ¥याल नकाढी प्रदेश र गाउँपालिकाको आम्दानीमा गाभ्दा सर्वाेत्तम हुने तर्क गर्छन् । सोलुखुम्बुमा सगरमाथासहित ल्होत्से, नुप्त्से, आमाडब्लमलगायत आधा दर्जन हिमालको पनि वार्षिक आम्दानी राम्रो छ । रासस
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले मागे विश्वासको मत
जोखिम युक्त बस्ती स्थानान्तरण जरूरी
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जन्म कुण्डली : तत्काल
सर्वोच्चद्वारा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पद
स्याङ्जामा असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो
विहे गर्दैमा जागिर नजाने एसओएसमा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जन्म कुण्डली : तत्काल..
उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप एक साता..
उपप्रधानमन्त्री महतोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, ५..
एसओएस सुर्खेतकी ‘आमा’ पीडित
काठमाडौंमा थप २८५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
बाढीपहिरो र डुबानमा परी २० जनाको..
धुलिखेलको बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण र स्वास्थ्य..
नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भेटिएको स्वास्थ्य..
अस्मिता हत्या प्रकरण : भित्री मधेस..
बनेपा घटना :श्रीमती र छोरा मारेर रातभर ओछ्यानमै
ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पाँच लाख नाघ्यो
काभ्रेमा सातौ पटक थपियो निषेधाज्ञा
राइफलको गोली लागेर सेनाका जवान गम्भीर घाइते
टिकटकद्वारा अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरुका लागि गोपनीयता नीति परिवर्तन
पहिरोसँगै झरेको ढुंगाले लागेर मृत्यु
डोटी जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्या हस्तान्तरण
बाढीपहिरो र डुबानमा परी २० जनाको मृत्यु, ८ सय ६ जनाको उद्धार